Guddiga IEBC oo beeniyay in ay wada shaqeyn hoose la leeyihiin xisbiga Jubilee – The Voice of Northeastern Kenya
Guddiga IEBC oo beeniyay in ay wada shaqeyn hoose la leeyihiin xisbiga Jubilee
Masuuliyiinta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee IEBC ayaa gaashaanka ku dhuftay eedeyn loo jeediyay oo ku saabsan in ay gacan saar la leeyihiin xisbiga talada ahaya ee Jubilee.
Saraakiisha guddiga ayaa beeniyay eedeynta uga timid dhinaca mucaaradka oo ku aadan in ay Jubilee kula heshiiyeen sidii ay doorashada 2017-ka ugu shuban lahaayeen.
Madaxa dhinaca isgaarsiinta iyo saxaafadda ee IEBC Andrew Limo ayaa sheegay in guddigiisa ay ka go’abtahay hirgalinta xeerarka u yaalla maareynta doorashada.
Mr Limo ayaa nasiib darro ku tilmaamay hadalka kasoo yeeray madaxda isbahaysiga ugu weyn mucaaradka dalka ee CORD, kuwaasoo aaminsan in gudiga doorasha uu dhinac u janjeero.
Hogaanka isbahaysiga CORD ayaa warqad arrintaan ku saabsan guddiga IEBC u diray 3-di bishaan November, iyagoo mar ke cadeeyay in aysan waz kalsooni ah ku qabin xubnaha gudiga madaxa bannaan ee doorashada.
4-ti bishii October ee lasoo dhaafay ayaa waxaa dhaqan galay isbadal cusub oo lagu sameeyay xeerka doorasha iyo hannaanka guddiga IEBC, waxaana qodobadii uu sharciga cusub dhigayay ka mid ahaa in ay xafiisyada banneeyaan dhamaan 9-ka xubnood ee guddiga IEBC, si xubno kale oo cusub loo soo magacaabo.
← Diyaaradaha Turkey-ga oo duqeymo ka geystay Syria
Madaxa caddaaladda oo la filayo in uu xoojiyo wax qabadka waaxda garsoorka →